USalina, KS • Ukuhlikihlizwa komzimba ne-NuRu Massage
Vunguza ngemuva kwalokho ngomunye wabasiki besitho sokugcobisa umzimba noma i-Nuru massage Salina, isitayela se-KS!
ISalina idolobha futhi liyisihlalo sesifunda saseSaline County, Kansas, United States. Ngokubalwa kwabantu kuka-2010, inani ledolobha lalingu-47,707. Kutholakala kwenye yezindawo ezinkulu kakhulu ezikhiqiza ukolweni emhlabeni, iSalina iyisikhungo sokuhweba sesifunda esisenyakatho-maphakathi neKansas. Vulela umoya kamuva ngomunye wemasseuse ka- ukuvusa umzimba okuvusa inkanuko or UNuru massage Salina, KS isitayela!